Axmed Maxamed Sulaymaan ‘Shiraac’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Toddobo iyo toban kii September, oo Isniin ah, galbeed b’aan u socday oo jarnay konton liig habeen kii iyo maalin tii. Maayad wacan baa nagu gargaaraysay majaraha. Aroor tii muuqaal cushub baa soo siyaadayay u muuqday sidii dhiro webi, oo mid kood raggii ku arkay qooqab nool. Kan oo’n ugu faro adaygay si ay dhammaan u arkaan oo cindiga u geliyaan berri. Biyaha baddu waa ka milix yaraayeen kuwii ‘Canaries’ ee aannu ka soo baaryoonnay. Tan oo’n ku dukhuulay in badan in ay dhadhamiyaan. Geyreyaashu, giddi, waa fududaayeen. Qof kasta waa faraxsanaa, oo kor’aa baxridi fiicnayd u baxday si ay …